Ciyaarta Ugu Horreysa Ee Ralf Rangnick Uu Hoggaamin Doono Manchester United Oo La Shaaciyey - Laacib
HomeWararka CiyaarahaCiyaarta Ugu Horreysa Ee Ralf Rangnick Uu Hoggaamin Doono Manchester United Oo La Shaaciyey
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa si rasmi ah u shaacin doonta tababaraheeda cusub ee Ralf Rangnick ka hor inta aan la gaadhin ciyaarta Chelsea ee horyaalka Premier League ee Axadda, taas oo uu ka daawan doono dusha sare ee garoonka Stamford Bridge ka hor inta aanu caynaanka qabanin ee aanu hoggaamin kulanka xiga ee dhamaadka usbuuca.
Jamaahiirta Manchester United ayaa isweydiinayay haddii uu Ralf Rangnick fursad u heli doono inuu kooxda layliyo ciyaarta Chelsea ee ay sida aadka ugu baahan yihiin guul ay sare ugu soo dallacaan kaddib khasaarihii Watford ee u riday kaalinta siddeedaad, ayaa waxay hadda heleen xaqiiqada ah, in Michael Carrick loo daayey kulanka Stamford Bridge.
Manchester United oo Axaddii shaqada ka caydhisay Ole Gunnar Solskjaer, ayaa Khamiistii heshiis la gaadhay Rangnick oo 63 jir ah, kaas oo qalinka ku duugaya heshiis lix bilood ah oo uu si ku-meelgaadh ah illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan xilka ugu sii haynayo.
Sky Sports News ayaa sheegtay in kooxda 20ka horyaal ku guuleysatay ee Manchester United ay si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto tababare Ralf Rangnick 48 saacadood gudahood, kaddibna ay usoo bandhigi doonto saxaafadda.
Warku ma cayimin waqti go’aan oo ka mid ah 48-kan saacadood, sida inay noqonayaan kuwa ugu soo horreeyaa, kuwa dhexe iyo kuwa ugu dambeeya midkoodna, hase yeeshee waxay ka dhigan tahay in aanu noqonayn tababaraha kooxda kulanka Chelsea oo Carrick sii maamuli doono naadiga.
Ciyaarta ugu soo horreysa ee Ralf Rangnick uu maamuli doono Manchester United ayaa noqon doonta ciyaarta adag ee Manchester United ay garoonkeeda Old Trafford ku qaabbili doonto Arsenal habeenka Jimcuhu soo gelayo ee December 2.